International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ။ မြန်မာအာဏာပိုင်များမှ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပေါ် စွဲချက်အားလုံး ရုပ်သိမ်းကာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ။ မြန်မာအာဏာပိုင်များမှ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပေါ် စွဲချက်အားလုံး ရုပ်သိမ်းကာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်
မြန်မာအာဏာပိုင်များမှ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအပေါ် စွဲချက်အားလုံးရုပ်သိမ်းကာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးရမည်
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့
[ရန်ကုန် - ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့] မြန်မာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့် ကျင့်သုံးမှုအတွက် မှားယွင်းစွာ တရားစွဲဆိုထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် စွဲချက်အားလုံးကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးရမည့်အပြင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ငြိမ်းစုစီဥပဒေ) ကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်ဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ (Progressive Voice) မှ ယနေ့ထုတ်ပြန်သော သုတေသနစာတမ်းတွင် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲများအတွင်း ပိတ်မိနေသော ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူ (IDP) များအတွက် လူသားချင်းစာနာရေး အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်ရေးအတွက် သော်လည်းကောင်း၊ ထောင်ချီသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဆက်လက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးစေသည့် ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်တန့်စေရေး အတွက်သော်လည်းကောင်း ဧပြီလနှင့် မေလအတွင်း မြစ်ကြီးနား၊ ရန်ကုန်နှင့် အခြားမြို့များ၌ စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုများ အတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ် အနည်းဆုံး ၄၇ ဦး တရားစွဲဆိုခံထားရပါသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထင်ရှားသမိုင်းကြောင်း အရှည်ကြီးတွေ ရှိခဲ့တယ်။" ဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အောင်ခိုင်မင်းကပြောဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်သည် ယခင် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုမှုကြောင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရဖူးသည်။ "ကျနော်တို့ လိုလားချက်တွေနဲ့ ပူပန်မှုတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖွင့်ဟနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းချက် တွေကို အစိုးရက မချိုးနှိမ်ဘဲ ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့၊ အားပေးမြှင့်တင်ပေးဖို့၊ အလေးထားဖို့ အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
"ပြည်သူလူထု လိုလားချက်ကို သိသင့်ပြီ - လွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု" သုတေသနစာတမ်းတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဦးဆောင်သော အစိုးရမှ ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ငြိမ်းစုစီဥပဒေ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်ပြထားပြီး ထပ်ဆင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးများ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအား မြန်မာအာဏာပိုင်များမှ လက်လွတ်စပယ်ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုရန် ငြိမ်းစုစီဥပဒေကို မည်သို့ဆက်လက်အသုံးပြုနေပုံ၊ စုဝေးပွဲများကို ပံ့ပိုးကာကွယ်ပေးရမည့်အစား တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်ရမည်ဆိုသည့် သဘောတရားအား ဆက်လက် ကိုင်စွဲနေပုံတို့ကို ဤစာတမ်းတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြ ထားသည်။
"အဆိုပြုထားတဲ့ ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်တွေသာ အတည်ဖြစ်သွားရင် ဥပဒေကို ရဲက သူတို့လိုသလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရသွားမယ်။ ဒါဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့် ဆိုင်ရာ အခြေခံအခွင့်အရေးကိုလည်း လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားရလိမ့်မယ်။" ဟု တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်ပြီး မတ်လတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ၂၀၁၈ ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများအား တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာညိုညိုသင်း ကပြောသည်။ "အစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပိုလုပ်ပေးရမယ်။" ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ပြင်ဆင်ထားသည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ငြိမ်းစုစီဥပဒေတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် "ခွင့်ပြုချက်" အစား ကြိုတင် "အသိပေးအကြောင်းကြားချက်" သာ လုပ်ရန် သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း ကြွေးကြော်သံများနှင့် ဆိုင်းဘုတ်များတွင် ပါဝင်မည့် အသုံးအနှုန်း စာသားများအပါအဝင် အချက်အလက်များစွာ တင်ပြရန်လိုအပ်သဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးရန် လိုအပ်ချက်များသည် ပံ့ပိုးစီစဉ်ပေးရန်အတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များထက် များစွာကျော်လွန်နေပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် စောင့်နေသော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဥပဒေမူကြမ်း၌ အဆိုပြုထားသည့် ပြင်ဆင်ချက်များက ပိုမို၍ပင် တင်းကျပ် ချုပ်ချယ်သည့် စည်းကမ်းချက်များ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပွဲ စီစဉ်သူများအနေဖြင့် စုဝေးပွဲအတွက် ရံပုံငွေ ထောက်ပံ့သူများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်ကိုပါ တင်ပြရန်လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုမျှမက ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀(ဋ) အရ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပွဲများကို ဦးဆောင်စီစဉ်သူများနှင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများသည် ယခင်က ရှိထားသည့် ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဝေဝါးသော ပုဒ်မကြောင့် ရဲအပါအဝင် ဒေသန္တရအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် စုဝေးပွဲစီစဉ်သူများနှင့် သဘောတူညီချက် ရယူရန် တောင်းဆိုစေနိုင်ပြီး အကယ်၍ သဘောတူညီချက်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် သို့မဟုတ် ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်များက ငြင်းပယ်လျှင် စုဝေးပွဲပါဝင်သူများကို ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်မှာ ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၂၀ အရ စီစဉ်သူများ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းပါဝင်သူများသည် မူလအသိပေး အကြောင်းကြားစာတွင်ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်ထက် ကျော်လွန်သွားပါက၊ ဥပမာ ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးမှ ကြိုတင်အတည်ပြုမထားသော ကြွေးကြော်သံတစ်ခုကို သုံးစွဲလျှင်ပင် ယင်းစုဝေးပွဲမှာ ပြစ်မှုမြောက်သွားသည်။
"မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်တွေ ဆက်လုပ်နေတဲ့အပြင် IDP တွေဆီ လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေကို မရောက်အောင် ဆက်ပြီးတားဆီးနေတယ်ဆိုတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့် နေရပ်စွန့်ပြေးနေရတဲ့ သိန်းချီတဲ့ IDP တွေကို မကာကွယ်နိုင် မစောင့်ရှောက်နိုင် ဖြစ်နေရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့က ဒီ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်နေရတဲ့ လူထုတွေကို အားပေးထောက်ကူဖို့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ စုပေါင်းအသံတွေ ကျယ်ကျယ်ထွက်အောင် လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။" ဟု လွမ်းဇောင်း က ဆိုသည်။ ၎င်းသည် မြစ်ကြီးနားဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်စီစဉ်သည့် ကချင်လူငယ်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းဦးက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၀ အရ အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံနေရသူလည်း ဖြစ်သည်။ "အထူးသဖြင့် တတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို လုပ်တော့မှာဆိုတော့ ဒီကာလမှာ အင်မတန် အရေးကြီးနေပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး စုပေါင်းအသံတွေ ကျယ်လောင်လာအောင် တောင်းဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အမြစ်တွယ်အောင် အားပေးနေတာမျိုးဖြစ်လို့ပါ" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မြစ်ကြီးနား နှစ်မြို့စလုံးတွင် လူငယ်အမျိုးသမီးများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပွဲ များကို စီစဉ်စည်းရုံးရာတွင် လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း ထင်ရှားသည့်အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ခဲ့ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက် မှုများ အပါအ၀င် လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် တိုက်ရိုက် သော်လည်းကောင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် သော်လည်းကောင်း အာဏာပိုင်များနှင့် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်များ၏ တိုက်ခိုက် ခြင်းကို ထပ်ဆင့်ကြုံတွေ့ကြရသည်။
"ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဦးဆောင်စီစဉ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေကို လေးစားဖို့လိုသလို တချိန်တည်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။" ဟု ရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင်စီစဉ်သူအမျိုးသမီးများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူ အိအိမိုးက ပြောသည်။ "ကျမတို့ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းပြောတဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ခြိမ်းခြောက် မှုတွေ၊ အနှောင့်အယှက်ပေးတာတွေကို အထူးသဖြင့် ရဲနဲ့ မဘသတွေက လူမှုကွန်ယက် ပေါ်ကတစ်ဆင့် နှောင့်ယှက်တာခံရပေမယ့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အတွက် လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းတွေကို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်စိန်ခေါ်သွားမှာပါ။" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ "ကျမတို့မကြောက်ဘူး၊ ကျမတို့ အခွင့်အရေးအတွက် ဆက်လုပ်သွားမယ်။" ဟု ၎င်းက ထပ်ပြောသည်။
ရှေ့ပြေအသံအဖွဲ့မှ မြန်မာအစိုးရ၊ စစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအပါအ၀င် အထူးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလှူရှင်များ အနေဖြင့် IDP များအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် လုံခြုံဘေးကင်းမှု ဆောင်ကျဉ်းပေးရေး အာမခံရန်၊ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန်၊ ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေအား ပြင်ဆင်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှား သူများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးရန် တိုက်တွန်းထားပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအပေါ် တရားစွဲဆို ထားချက်များအားလုံး ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
သုံးသပ်ချက်စာတမ်း မြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
[Yangon - 12 July, 2018] The Myanmar authorities must immediately drop all charges against individuals who have been wrongfully charged for exercising their rights to freedom of peaceful assembly and work towards amending the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law (PAPPL), Progressive Voice said today inanew briefing paper. At least 47 youth activists have been charged for their role in peaceful protests in Myitkyina, Yangon and elsewhere, which were organized throughout April and May in response to the urgent humanitarian needs of internally-displaced persons (IDPs) in Kachin State who were trapped in conflict and the civil war that continues to displace thousands of ethnic nationalities.
"Myanmar hasalong and significant history of peaceful assemblies," said Aung Khaing Min, Executive Director of Progressive Voice who was himself imprisoned for seven years in 1997 for speaking out against the former military regime in Myanmar. "It is crucial that efforts to peacefully raise our voice and concerns be facilitated, promoted and celebrated by the government, not suppressed," he continued.
"Time to Hear Our Voices: Freedom of Assembly and Youth Peace Movement in Myanmar" highlights shortcomings of the PAPPL -alaw that was amended by the National League for Democracy (NLD) in 2016 - while identifying the important role of women activists as they face additional discrimination and threats. The briefing paper elucidates how the PAPPL continues to be used to arbitrarily charge and arrest peaceful protesters, while retaining the assumption that assemblies are to be tightly controlled and minimized rather than facilitated and protected.
While the amended 2016 PAPPL requires only prior "notification" rather than "permission" in order to holdapeaceful assembly, the information required exceeds far beyond that which is necessary for the facilitation of peaceful assembly, including the content of all slogans and signs to be used. The amendments proposed in the 2018 bill, which were passed in the Upper House of Parliament and currently awaitingavote in the Lower House, would place even more restrictive requirements by requiring the organizers of peaceful assemblies to submit information on the source of funding for the assembly. Dr. Nyo Nyo Thin,aformer independent MP who took responsibility for the protests against the 2018 proposed amendments to the PAPPL, stated at the press conference, "If these amendments to the law are passed, the police will be able to interpret the law anyway they want to, and our basic right to freedom of assembly will be completely gone. The government must do more to protect the rights of peaceful protesters."
In addition, Article 10(k) of the PAPPL requires that organizers of peaceful assemblies and its participants follow predefined local regulations and related agreements. This catch-all requirement allows local authorities, including the police, to insist on coming up with an agreement with organizers - and if local authorities withhold agreement or if agreement is not upheld, the assembly participants can be charged with violating the law. Related to this provision is Article 20 of the PAPPL. Article 20 criminalizes assemblies in which organizers or participants go beyond the information provided in the initial notification, for instance, even if one participant usesaslogan that was not pre-approved.
"If the government is failing to protect the hundreds of thousands of IDPs displaced due to armed conflict as the Myanmar military continues to wage war and prohibit IDPs access to humanitarian aid, we have to do what we can to raise our collective voice to support our communities affected by this decades-long conflict," said Lum Zawng, one of the Kachin youth organizers of the Myitkyina protest who was subsequently charged for criminal defamation under Article 500 of the Penal Code by the Myanmar military Lt. Col. Myo Min Oo. "This is especially important now as the third Panglong conference is underway, because it ultimately encourages peace, democracy and human rights to take root in the country," he continued.
"Authorities have to respect and at the same time consider the particular ways in which women experience violence and threats in organizing and participating in peaceful protests," said Ei Ei Moe, one of the young female leaders of the peaceful protest in Yangon. "Despite receiving sexually-explicit and violent threats and harassments, particularly by police and nationalists on social media, we are continuing to challenge social and cultural norms towardsamore inclusive society," she continued. "We are not afraid, we will continue to stand up for our rights," she added.